संसदिय दलको नेता बन्न काँग्रेस भित्र लफडा चुलिदै, को को छन दावेदार ? – Vision Khabar
संसदिय दलको नेता बन्न काँग्रेस भित्र लफडा चुलिदै, को को छन दावेदार ?
। ३ पुष २०७४, सोमबार १३:१८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस भित्र संसदिय दलको नेता को बन्ने भन्ने दाउमा नेताहरुले दौडधुममा व्यस्थ छन् । प्रतिपक्ष दलको नेता समेत बन्ने निस्चित भएपछी काँग्रेसका नेताहरु आःआफ्नो दाउ थापिरहेका छन् ।
काग्रेसले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा समानुपातिक तर्फ करिव ४० सिट पाउने भएपछि शिर्ष नेताहरु आफ्ना पक्षका मान्छेलाई सांसद बनाउन पहल शुरु गरेका छन् । प्रत्यक्ष तर्फ २३ जना निर्वा्चित भएको काग्रेसमा विपक्षी दलको नेता को हुने भन्ने बारेमा बहस शुरु भएको हो । संसदिय दलको नेता बन्न काँग्रेसभित्र लफडा हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता प्रकाशमान सिंह आफै विपक्षी दलको नेता बन्ने दाउमा छन् भने उहाहरुलाई छाडेर रामचन्द्र पौडेल आफ्ना मान्छेलाई दलको नेता बनाउने कसरतमा जुट्नु भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वा्चित मध्ये देउवाको पक्षमा ८ जना सांसद, पौडेल र शंशाक कोइरालापक्षका १२ र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका ३ सांसद रहेको बताइएको छ ।
अब ४० जना पाउने पाएपछि सबै भन्दा वढि आफ्नै पक्षका सांसद चुनेर पठाउने तयारीमा सभापति देउवा देखिनु भएको छ । जम्मा ६३ जना सांसद हुने भएपछि कांग्रेसका दुई पक्षबिचमा आफ्ना मान्छे धेरै राखेर बलियो बन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । आक्रोसित प्रकाशमान पनि आफैँ ससंदीय दलको नेता बन्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ ।।